Turkiga oo kenya hubeyneysa si ay ula dagaalanto Al Shabaabka Soomaaliya – XAMAR POST
Turkiga oo kenya hubeyneysa si ay ula dagaalanto Al Shabaabka Soomaaliya
By Mohamed Abdi On Jun 5, 2021
Dawlada Kenya ayaa dhigeeda Turkiga kula heshiisay in ay ka iibiyaan Gaadiid kuwa dagaalka ah oo aanay rasaastu Karin.
“Gaadiidkeena Afarta lug Bareegga ka qabta ee Hızır, ayaa laga amaanay Qaaradda Afrika oo dhan sidaas darted waxaa sii kordhaya suuqeena Afrika”sidaas waxaa yiri Furkan Katmerci, oo ah Guddoomiye ku xigeenka Sharikadda Gaadiidka dagaalka sameysa ee Katmerciler.
Madaxda Sharikadda ayaa u sheegay Wakaaladda Wararka Anadolu Agency , in Gaadka laga iibinayo Kenya iyo kuwa cusub oo aan wali horay loo arag lagu soo bandhigi doono Bandhigga caalamiga ah ee 15aad oo la qabanayo Bisha August ee soo socota.
Kenya ayaa Turkiga ka iibsaneysa 118 Gawaarida dagaalka ah ee aanay Rasaasta karon sida ku cad heshiiska labada dal ay kala saxiixdeen.
Katmerci; ayaa sheegay in Kenya ay tahay dalka 3aad ee Afrikaan ah oo iibsada Gaadiidkooda,waxaana uu xusay in dhamaan 118ka Gaari ay Kenya gaari doonaan muddo laba sano gudahood ah.
Hızır waa nooc ka mid ah gawaarida dagaalka oo aad looga taxadaray mana karaan Miinooyinka, Garneyllada iyo waxyaabaha kale ee qarxa sida lagu sheegay warbixinta SHarikadda Farsameysay ee heshiiska la gashay Kenya.
Gawaaridan ayaa la mariyay Imtixaanaadka NATO iyo sidoo kale kuwa Caalamiga ah,waxaa lagu tijaabiyay qaraxyada dhamaanna waxaa ay ka gudbeen shuruudahaas
Guddoomiye ku xigeenku waxaa uu sheegay in ay Kordhinayaan wax soosaarkooda maaddaama suuqyada Afrika ay fursad fiican ku hyayaan islamarkaana rajeynayaan in dalal kale oo Afrikaan ah ku biiraan.
Zipporah Kioko, oo ah Afhayeenka Wasaaradda Gaashaandhigga Kenya ayaa bishii January ee la soo dhaafay sheegtay in ay dowladda diiradda saareyso badbaada Askarteeda dagaalka kula jira AL shabaab.
Katmerciler; waxaa uu sheegay in Sanadkii la soo dhaafay 989 Gawaarida dagaalka ah laga iibsaday dhamaan Caalamka.
Kenya ayaa 50 Gaadiidka dagaalka ah ka iibsatay SHiinaha sanadkii 2016kii waxaana ay dhamaantood u dhamaadeen Qaraxyada AL shabaab sida ay shaacisay Wasaaradda Gaashaandhigga Kenya Sanadkii 2018kii.
Duqa Muqdisho Oo maanta dhagax dhigay Xarunta cusub Ee…
Banaanbax ka dhashay Natiijada Doorashada Gabiley oo ka dhacay…